A kwadoro ihe nkedo kemịkalụ maka ndị na-edina n'ike ugboro ugboro na Pakistan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Pakistan » A kwadoro ihe nkedo kemịkalụ maka ndị na-edina n'ike ugboro ugboro na Pakistan
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Pakistan • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
A kwadoro ihe nkedo kemịkalụ maka ndị na-edina n'ike ugboro ugboro na Pakistan.
Ndozigharị ọhụrụ na-ewebata ntaramahụhụ ọnwụ ma ọ bụ ikpe ndụ maka ndina n'ike n'ike yana nkedo kemịkalụ maka ndị mejọrọ mmekọ nwoke na nwanyị ugboro ugboro, na nkwenye nke onye ikpe mara.
Ihe na-erughị 3% nke mwakpo mmekọahụ ma ọ bụ mmeko nwoke na nwanyị na Pakistan na-ebute ikpe.
Ọ bụrụ na ekenye nkedo kemịkalụ ka ntaramahụhụ, “a ga-eduzi ya site na bọọdụ ahụike amaara ọkwa,” dịka iwu ọhụrụ siri dị.
Pakistan sonyeere South Korea, Poland, Czech Republic na ụfọdụ steeti US, ebe ewebatala nkedo kemịkal.
Ndozigharị ọhụrụ na iwu dị ugbu a, nke na-enye ohere maka nkwenye ngwa ngwa yana ntaramahụhụ siri ike maka ndị na-edina mmadụ n'ike, ndị omeiwu Pakistan akwadola ụnyahụ.
Ndị omekome a mara ikpe maka ọtụtụ ikpe nke ndina n'ike ugbu a nwere ike ịwenye ọgwụ kemịkal n'ime Pakistan ka ndị omeiwu obodo ahụ kwadoro iwu ọhụrụ e mere iji kwụsị ịrị elu nke mmejọ mmekọahụ.
A kọwara ihe nkedo kemịkalụ n'ụgwọ ahụ dị ka usoro nke “a na-eme ka mmadụ ghara inwe ike inwe mmekọahụ ruo oge ọ bụla nke ndụ ya, dị ka ụlọ ikpe nwere ike ikpebi site na nchịkwa ọgwụ.”
A na-eme atụmatụ iguzobe ụlọ ikpe pụrụ iche n'ofe mba ahụ iji hụ na a na-ewepụta mkpebi ikpe n'okwu gbasara mwakpo mmekọahụ "ngwa ngwa, ọkachamma n'ime ọnwa anọ." Ọ bụrụ na ekenye nkedo kemịkalụ ka ntaramahụhụ, “a ga-eduzi ya site na bọọdụ ahụike amaara ọkwa,” dịka iwu ọhụrụ siri dị.
Mushtaq Ahmed, onye omebe iwu nke otu okpukperechi Jamaat-i-Islami, katọrọ na mbụ ụgwọ a dị ka ihe megidere Islam. Ahmed rụrụ ụka na onweghị okwu gbasara nkedo kemịkalụ na iwu Sharia nakwa na a ga-akwụgide ndị n'ike n'ike n'ihu ọha.
Site na iji ọgwụ eme ihe iji belata agụụ mmekọahụ nke ndị mejọrọ mmekọahụ ugboro ugboro, Pakistan sonyere South Korea, Poland, Czech Republic na ụfọdụ US steeti, ebe ewebatala nkedo kemịkalụ.
Onye isi ala Pakistan Arif Alvi debere nha a na tebụl otu afọ gara aga na nzaghachi maka nnukwu mkpesa ọha na eze maka mmụba n'ofe mba ahụ n'ihe gbasara mmeko nwoke na nwanyị metụtara ma ụmụ nwanyị na ụmụaka.
N'oge ahụ, Amnesty International katọrọ nkedo kemịkalụ dị ka mmeso ọjọọ na mmeso ọjọọ, na-adụ ọdụ Islamabad kama itinye uche n'ịhazigharị usoro ikpe ziri ezi ya "nwere ntụpọ" yana ịhụ na ikpe ziri ezi maka onye ahụ.
Dabere na NGO mpaghara War Against Rape, ihe na-erughị 3% nke mwakpo mmekọahụ ma ọ bụ mmeko nwoke na nwanyị na Pakistan na-ebute ikpe.